Diraamaa biraa: Shirri G7 hin milkaayu - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Diraamaa biraa: Shirri G7 hin milkaayu
Diraamaa biraa: Shirri G7 hin milkaayu
Woyyaaneen jalqabatti Wotaritti nama fixxe. ABOtu kana godhe jette. Itti aansitee Baddannotti ummata fixxe. Ammas, ABOtu kana godhe jette. Kaayyoon isii Amaaraa fi Oromoo walitti buusuu, ABO akka farra dhala namaatti dhiyeessuu fi ummata Itoophiyaa funduratti bulguu fakkeessuu ture. ABO irratti maqa balleessaa erga geggeessanii booda tarkaanfii halleellaa ABO irratti fudhachuu eegalan. Kun 1992 ta’e.
Amma, deeggarsaa fi jaalala Dr Abiyyii fi Ob Lammaan Oromoo fi ummata Itoophiyaa biraa qaban Woyyaanee fi G7 beeku. Deeggartoonni G7 osoo hin hafin Dr Abiyyii fi Ob Lammaa kan jaalatan. Amma, G7 biyyatti deebi’eera. Bakka ummanni isaan deeggartoota keenna jedhanii laakkawatan jaalala Dr Abiyyii fi Ob Lammaan qabametti G7 fi Birhaanuun bakka qabaachuu hin danda’an. Dr Birhaanuun Finfinnee keesssatti bakka argachuuf Dr Abiyyii fi Ob Lammaan onnee ummataa (sabootaa) keessaa bayuu qaban. Dr Abiyyii fi Ob Lammaa hin jaalatinaa dhiisaan kun waan ta’uu miti. Shirri xaxamuu qaab. Kunis ajjeechaa suukkanneessaa Oromiyaa keessatti saboota irratti raawwachuuudha. Oromiyaa keessatti ajjeechaa garajabeenyaa raawwataa Dr Abiyyii fi Ob Lammaan dhaabsisuu hin dandeenne ykn lubbuu sabootaaf hin dhimmamne ykn ammoo harka keessaa qaban jechuu barbaadu. Ajjeechaa Buraayyuuf namonni heddu G7tti quba qabanis, ammatti 100% wanti mirkanaaye hin jiru. Haalli waarri G7 fi ESAT dhimma kana itti hargufaa jiran garuu dhimma kana dantaa siyaasaaf oolfataa jirachuu isaanii qofa osoo hin taane harka keessaa qabu waan jedhu sanis kan baayee cimsuudha.
Gaamoon bifa suukkanneessa ta’een, sanuu Oromiyaa keessatti, ajjeefamuun nama laalessa. Warri badii kana raawwate seeratti dhiyaatu qaba. Biyya Oromoon kumaatamni Liyyuu Poolisiin ajjeefamee fi miliyooni qe’ee fi qabeenya isaa irraa buqqifame keessatti saba Gaamoo irraa 25 ajjeefameef ‘Ethnic cleansing’ jechuun miidhaa Gaamoo irra gaye ibsuu osoo hin taane Oromoo irratti saboota kakaasuu, bulchiinsa Dr Abiyyi irratti waraana labsuudha.
Previous articleMaaltu ta’aa jira?
Next articleKilaashiin 40 seensa Finfinnee irratti too’annaa jala oole
© Walabu Media 2020